Acacia (အကေးစီးရား) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Acacia (အကေးစီးရား)
Acacia (အကေးစီးရား) ကဘာလဲ။
အကေးစီးရား ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Acacia ကို အောက်ပါအခြေအနေတွေအတွက် သောက်ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုကြပါတယ်။
Irritable bowel syndrome (IBS) ဝမ်းဗိုက်မအီမသာရောဂါ
Acacia ကို အခြားအခြေအနေတွေအတွက်လည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ကို ပိုမိုသိရှိဖို့ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Acacia ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုံလောက်တဲ့ လေ့လာမှုတွေ မရှိသေးပါဘူး။ ပိုမို သိလိုတဲ့ အချက်အလက်တွေ ရှိရင် Herbal ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လေ့လာမှုအချို့ကတော့ အောက်ပါအချက်တွေကို ဖေါ်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
Acacia မှာ အမျှင်ဓါတ်များစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူဟာ လူတွေကို ဗိုက်ပြည့်စေပြီး အစာစားခြင်းကို ရပ်တန့်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းစေပြီး ကိုလက်စထရော ပမာဏကိုလည်း ကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။
တိရိစ္ဆာန်တွေမှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ လေ့လာမှုတစ်ခုက Acacia အမျှင်ဓါတ်ဟာ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ acetaminophen ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ အသည်းပျက်စီးမှုကို တားမြစ်ပေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဥပမာ Pharmacology Research ဆေးဝါးသုတေသန က ၂၀၀၃ မှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ လေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့ Acacia အမျှင်ဓါတ်ဟာ ဓါတ်တိုးခြင်းကြောင့် ဖြစ်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုကို လျှော့ချပေးပြီး အသည်းပျက်စီးမှုကို တိုက်ခိုက်ပေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အကေးစီးရား အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ကိုယ်ဝန်ရှိရင်၊ ကလေးနို့တိုက်နေရင်။ သင်ဟာ ကလေးရလိုရင် (သို့) ကလေးနို့တိုက်နေရင်
ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်နဲ့သာ ဆေးတွေကို သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။
Acacia နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆေးတွေ၊ အခြားဆေးတွေ၊ အခြား herbal တွေနဲ့ မတည့်ရင်။
အကေးစီးရား က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
Acacia အသုံးပြုခြင်းကို စီစဉ်ထားတဲ့ ခွဲစိတ်မှုမတိုင်မီ နှစ်ပတ်အနည်းဆုံးကြိုပြီး ရပ်သင့်ပါတယ်။
အကေးစီးရား ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
Acacia ကနေ အောက်ပါဆိုးကျိုးတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဝမ်းလျှောခြင်း (ဥပမာ မနက်ပိုင်း ပျို့ခြင်း၊ ဝမ်းအနည်းငယ် လျှောခြင်း၊ ဗိုက်လေပွခြင်း)
အကေးစီးရား ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
Acacia ဟာ သင်အခုသောက်နေတဲ့ ဆေးတွေ (သို့) ရောဂါအခြေအနေတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။ အသုံးမပြုခင်
Acacia ကို amoxicillin နဲ့ တွဲသောက်ခြင်းဟာ ဒီပိုးသတ်ဆေး amoxicillin ကို ကိုယ်ခန္ဓါမှ စုပ်ယူခြင်းကို တားမြစ်နိုင်ပါတယ်။
အကေးစီးရား အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
Acacia ကို အသုံးပြုရမယ့် အချိုးအစားက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူနိုင်ပါဘူး။ အသက်အရွယ်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ အခြားအချက်အလက်တွေပေါ်မူတည်ပါတယ်။ Herbal supplements တွေဟာ အမြဲလုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိပါဘူး။ သင့်လျော်တဲ့ အချိုးအစားကို သိရှိနိုင်ဖို့ ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
အကေးစီးရား က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
Acacia ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Acacia. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-268-acacia.aspx?activeingredientid=268&activeingredientname=acacia. Accessed March 11, 2017